ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို: ဘူလဲကွ ငါတို့ရွာမီးတို့တာ
ကြည်ပြာရောင် ကောင်းကင်ကြီးအောက်က အဖြူရောင် တိမ်တိုက်တွေ ရွေ့လျှားသလိုမျိုး ငါဟာ ငှက်တစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့ လေဟုန်စီးရင်းပျံသန်းနေချင်ခဲ့တာပါ
သမီးပျို ရှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့ ။ရွာကိုမီးလောင်ပါလေရော ။ တောင်...တောင်...တောင်...တောင်...တောင်..... နဲ့ ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့ မီးလန့်သံကြောင်းခေါက်သံပါ ။ မကြားသဖူး အကြားထူးတော့ တစ်ရွာလုံး အုတ်အုတ်ကြွက်ကြွက်ပေါ့ ။ ရွာလယ်ခေါင်မှာ ချောင်းရှိတယ်ဗျို့ ။ နန်ကသူချောင်းပါ ။ သမီးပျိုတို့တော့ ရွာကို တောင်ဘက်ကမ်းနဲ့ မြောက် ဘက်ကမ်းဆိုပြီးခေါ်ကြလေရဲ့ ။ အဲ စလောင်တာကတော့ တောင်ဘက်ကမ်းက ။
မီးခိုးလေးတလူလူနဲ့ပေါ့ ။ ဘေးအိမ်တွေ ၀ိုင်းသတ်ပေးကြတယ်ထင်ပါ့ ။ မီးခိုးလေးက ပျောက်သွားလိုက် ပေါ်လာလိုက်နဲ့။ သမီးပျိုတို့ကဒီမီးခိုးလေး ပဲကြည့်နေရတာ မို့လား။ မီးခိုးတွေမြင်ပြီဆို သိမ်းကြဟေ့ ..သိမ်းကြ သိမ်းကြတော့ ။ မီးခိုးတွေ မတွေ့ရတော့ပြန်ဘူး ဆို မသိမ်းကြနဲ့တော့ဟေ့ ..............မသိမ်းကြနဲ့တော့ပေါ့ ။ အိမ်ကိုအချက်ပေးရတာ လမ်းပေါ်ကနေမီးခိုးကြည့်ပြီးလေ။
အိမ်ပေါ်က လူတွေက ပစ္စည်းတွေ သိမ်းမယ်လုပ်လိုက် ပြန်ချလိုက် ပြန်သိမ်းလိုက် နဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ် နေတော့ တာ ပဲ ။ ပြန်တွေးရင် ခုတောင်ရယ်ချင်တယ်။ အဲ သိပ်မကြာပါဘူး မီးခိုးတွေက မဲမဲ ....မဲမဲနဲ့ အလိပ်လိုက်ကို တက်လာတာပါ ကလား။ အံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေရင်းက သတိပြန်ဝင် လာပြီး ဒီတစ်ခါသေချာပြီဟေ့ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းကြတော့လို့အော်သံကြားလိုက်ပြီးတဲ့ တခဏ အားခဲပြီး အိမ်ဘက်ကို သုတ်ချေတင်လာကြပြီး လွှားကနဲပဲ အိမ်ပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်ကြတာလေ ။ ဟို သီချင်းထဲကလို တသိမ့်သိမ့်တုန်ကို ဖြစ်သွားတာပဲ ။
သမီးပျိုကတော့ ကြောက်လို့အိမ်ထောင့်မှာ ကုတ်ကုတ်လေးရယ်။ အဲ သိမ်းကြဟေ့ ဆိုတော့မှ ခက်ပြီ။ ဘယ်ကစသိမ်းကြမတုန်း။ ဘယ်ပစ္စည်းမှလဲ အဆုံးရှုံးခံချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမလား ။ ဟိုဟာလေးလဲအရေးကြီး ဒီဟာလေးလဲအရေးကြီးနဲ့ ဆိုတော့ကာ ခက်ပြီအေ ။ သမီးပျို မိဘတွေက ကုန်သည်တွေဆိုတော့ကာ ဂိုထောင်ထဲမှာကုန်ကအပြည့် လှောင်ထားတာလေ ။ အဲဒီကုန်တွေကိုပဲ ထမ်းထုတ်ရ ကောင်းနိုး အိမ်ပေါ်ကဟာတွေကိုပဲ သယ်ရကောင်းနိုးနဲ့ ဘယ်ဟာက စရမှန်းကိုမသိကြဘူး။ နောက်တော့ အယ် ထူးပါဘူးဟယ် ....နီးရာကအရင်စတယ်ဟယ်ဆိုပြီး စဆွဲတော့မှ သိမ်းဖြစ်တော့တယ်ပေါ့ ။
တစ်ရွာလုံးမတော့ အော် သံတွေနဲ့ဆူညံနေလေရဲ့။ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မိခင်တွေက သားပျောက်ရှာပေါ့။ “ဟဲ့ ကလေးတွေ ဘယ်ရောက်ကုန် ကြတုန်း“ ။ “အော် ... ဟဲ့.“.....ဘယ်သူရေ ဘယ်ဝါရေ ...ဘာညာပေါ့ ။ တစ်ချို့အိမ်တွေကတော့ “နင့်အဖေကို သွားရှာစမ်း အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ်ဆို သုံးလို့မရဘူး“စသဖြငိ့ ပေါ့ ။ ဇော.....ဇော.... သိတယ်မဟုတ်လား။
မီးက တောင်ဘက်ကမ်းမှာတော့ အတော်လေး အရှိန်ကောင်းနေပြီ။အနီးအနားအိမ်တွေတော့ အားလုံးပါသွားတယ် ထင်တာပဲ ။ပြင်ဆင်ချိန်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ သမီးပျိုတို့ မြောက်ဘက်ခြမ်းးကနဲနဲခံသာတယ်ဆိုရမယ်။ နဲနဲလဲ ဝေးသေးတယ် ပြီးတော့ အလယ်မှာချောင်းလဲခြားသေးတယ် မို့လား ။သို့ပေမဲ့ မသိမ်းပဲလဲ မနေရဲကြဘူး ။ အစိုး မရဘူးမလား ။
အ..ဲ .......အဲဒီမှာ သမီးပျိုကငယ်တော့ လုံခြုံရေးတာဝန်ကျတယ် ။လူကြီးတွေ အိမ်ကသိမ်းထုတ်ထား တဲ့အပုံကို သမီးပျိုကစောင့်ပေါ့ ။စောင့်ဆိုလို့သာ စောင့်တာပါ ။ လူကိုရိုက်ပြီးပစ္စည်းယူပြေးလဲ ဘာတတ်နိုင်တာမှတ်လို့။ အဲ ဂလောက်အားကိုးရတာပါ ။အိမ်နောက်ဘက်တွေက ကွင်းပြင်ဘက်ဆိုတော့ တစ် ရွာလုံးခြံတွေဖျက်ပြီး အိမ်နောက်ဖက်မှာပဲ ပုံကြတာများတယ်။ လူတွေ လိုက်ကြည့်မိတော့ ဟိုပြေးဒီပြေး ဟိုအော် ဒီအော်ပေါ့လေ။ ဇရက်သိုက် ကြွက်ကိုက်နေသလို ညံနေတာပဲ ။
အဲ လာပြီ လာပြီ ။သူတို့လာကြပြီ ။ဘယ်သူတွေ လဲသိလား ။ အမျိုးတွေပေါ့ ။ကူသယ်ပေးရအောင် လာကြတာ ။ စစ်ကူပေါ့ ။ အယ် နှစ်ယောက်ထဲရယ် ။အဲ... သူတို့ ကလဲ ခေါင်းရင်းအိမ်ကို သာခုန်တက်ကြတာပဲ။မေ့မေ့ညီမ အပျိုကြီး ဒေါ်ကပ်စီးနေတာလေ ။ သူ့အငယ်ညီမ နဲ့အတူပေါ့။ စစ်ကူက သူတို့အတွက်လေ။ သူတို့လဲ ဗီဒိုကို အလုံးလိုက်မတယ် ။ နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ကိုမ တာ ။ အ သာလေးဘဲ။ လေးရမှန်းလဲ သိပါဘူး။အပျိုကြီးအိမ်ကလဲ ပြီးပြီ ။ အိမ်ကလဲ ဖေဖေနဲ့ကိုကို ထုတ်တာပြီးပြီ ။မေမေ လဲကူထုတ်ပေးပါဒယ် ။ အဟိ ။ဘာလဲသိလား ။ ခြောက်ဗို့ ဘထ္ထရီအိုးလေး တစ်အိုးလေ ။
သမီးပျိုတို့ ရွာကို အစိုးရက မီးမပေးသေးဘူးလေ ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖွဲမီးစက်တော့ရှိတယ်။မလာတာများသလို လာရင်လဲ မလင်းပါဘူး ။ပိုးစုန်းကြူးရဲ့ အဖိုးပေါ့။ အဲတော့ ကိုယ့်စက်ကိုယ်နှိုးစနစ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘထ္ထရီအိုးသုံးရတယ်။အဲဒီအိုးပေါ့ အမေ မ.လာတာ ဟား ဟား။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ပစ္စည်းတွေကို နီးရာရေတွင်းထဲ ပစ် ချကြတယ် ။ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေပေါ့ ။ နီးရာရေတွင်း ပစ်ပလိုက်တာပဲ သူ့ဟာကိုယ့်ဟာ နားမလည်ဘူး ။ တစ်ချို့များကြတော့ သမီးပျိုတို့ အိမ်ရှေ့က အထက်တန်းကျောင်းထဲက ကွင်းပြင်ကြီးထဲ သယ်ကြဆိုပဲ ။ ကွင်းကျယ်တဲ့ နေရာတွေပေါ့လေ။ ဝေးဝေးလဲဘယ်သယ်နိုင်ကြမလဲ တစ်အိမ်လုံးက ပစ္စည်းတွေဆိုတော့လဲ ။
သမီးပျိုရဲ့ မွေးသမိခင်က နောက်ထပ် ဘာတွေသယ်လာပြန်လဲဆိုတော့ လုံချည်အဟောင်းတွေထည့်တဲ့ခြင်းရယ် ကျောက်ပျဉ်ရယ် မ ပြီး သူလဲကျောင်းထဲ ၀င်ပြေးတယ်တဲ့ ။ ပြီးတော့ ကျောက်ပျဉ်လေးဘေးချ ငိုခြင်းချ နေဆိုပဲ ။ သူများတွေလို ရွှေထုတ်တို့ ငွေထုတ်တို့ မ.ပြီးမပြေးဘူး ။မီးမလောင်တဲ့ ကျောက်ပျဉ်မှ မ ပြေးတယ်။ နောက်မှ ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာပါ ။ ဟိဟိ ။
အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ ဖေဖေကပြောတယ် သမီး ရဲ့အဒေါ်တွေရှိတဲ့ရွာကိုပြေးတော့တဲ့ ။ စက်ဘီးပါယူသွားဆိုပြီး နင်းပြေးတာပေါ့ ။ ပြေးတဲ့လမ်းက လှည်းလမ်းကြောင်းပါ ရှေ့မှာက လှည်းတစ်စီးခံနေတော့ တော် တော်နဲ့ နင်းလို့ကို မရဘူးဖြစ်နေခဲ့သေးတယ် ။ နွားလှည်းဆိုတော့ တုံ့နှေးတုံ့နှေးပေါ့ ။ အဲ...လွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ နင်းတော့တာပဲ ။ ဖေဖေပြောလို့သာ ဖေဖေ့ရဲ့ညီမအိမ်ကိုပြေးရတာ ။ ရောက်ပြန်တော့လည်း ဘာလုပ်နေတယ် မှတ်လဲ ။ သူတို့လည်း လိုက်ကာအကြီးကြီးထဲကို ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေ စုပုံထည့်နေတာ ကိုယ့် တောင် ဂရုမစိုက်အားပါဘူး ။ ဒါနဲ့ မဖြစ်ခြေဘူး လို့တွေးပြီး မေမေ့ အမတွေရှိတဲ့ရွာဘက် ပြေးမယ်ကြံတော့ တွေ့ပြန်တယ် ရွာမြောက်ပိုင်းက ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ အပျိုကြီး အသိန်း ။
အသိန်းဆိုတာက ကပ်စီးနဲတဲ့ အပျိုကြီးပေါ့ ။ မေမေ့ညီမနဲ့သိပ်မထူးဘူး ။ အသိန်းက သိပ်ရယ်ရတာပဲ ။ ဆံပင် ဖြူတာတွေ့လို့ နှုတ်ပေးမယ် ဆိုရင် “ အမလေး မလုပ်ပါနဲ့ အမလေး မလုပ်ပါနဲ့ “ နေတာပဲ ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း အန်တီသိန်းရယ် လို့မေးကြည့်တော့ တစ်ချောင်းနှုတ်ရင် နှစ်ချောင်းပေါက်မှာ စိုးလို့ပါတဲ့ ။ ပြီးတော့ ကွမ်းယာ လည်း သိပ်ကြိုက်တာ ။ အခုလည်းကြည့်လေ သူများတွေ မီးလောင်လို့ အပူလုံးကြွ လို့ လူလုံးမလှ မျောက်မီးခဲ ကိုင်မိသလို ဖြစ်နေချိန်မှာ အန်တီသိန်းတစ်ယောက် ကတော့ ကွမ်းအစ် လေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးကို ကွမ်း ယာနေစားတာ သာကြည့်ပေတော့ ။ သူ့အိမ်ကပြေးလာတုန်းက သူသယ်လာတာ ကွမ်းအစ်တစ်လုံးထဲပဲ ဖြစ်ရ မယ် ။ မသကာ ရွေထုတ်ပေါ့ ။ အန်င်္တသိန်းရေ ပြေးရအောင်လေ လို့ပြောတော့ သူကလေ“ နေပါဦးဟဲ့ နင်ကလဲ ငါဒီမှာ ကွမ်းစားနေတုန်း“ တဲ့ ။
သူ့လဲခေါ်မရတာနဲ့ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထည်း ပြေးတာကောင်းပါတယ်လေ ဆိုပြီး ပြေးမယ်ကြံလိုက်တော့ ရှေ့ မှာလယ်ကွက်တွေပဲ ရှိတော့တယ် ။ဖေဖေ့ညီမတွေအိမ်က အစွန်ဆုံးအိမ်ကိုး ။ လမ်းမဘက် ပြန်လှည့်မယ် လုပ်တော့ ခုလောက်ဆို မီးတွေ နီးလာပြီ ထင်တယ်လို့တွေးမိပြီး စက်ဘီးကို လယ်ထဲမှာ ပစ်ထားခဲ့ပြီး အနီးဆုံး လှည်းလမ်းကြောင်းက သုတ်ချေတင် ပြေးတော့တာပဲဗျို့ ။ ဒါတောင် ပြေးရင်းနဲ့ လမ်းမှာ သွပ်ပျံ တွေဝဲလာလို့ ရှောင်လင်လုပ်ပြီး ပြေးခဲ့ရတာ တော်ရုံ ပြေးနည်းနဲ့ဆို ဘယ်လွတ်လိမ့်မလဲ ။
မေမေအမတွေအိမ် ရောက်ဖို့က နှစ်ရွာလောက် ကျော်ရသေးတယ် ။ ကြားထဲမှာက ကွမ်းခြံကုန်းရွာ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းကုန်း ရွာ ဆိုပြီး နှစ်ရွာ ရှိတယ် ။ အဲဒီရွာတွေ ကျော်ပြီးမှာ ဘယ်ပြားကုန်းဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်တာလေ ။ ငြိမ်းချမ်းကုန်း ရွာကိုဖြတ်တော့ ရွာသားတွေက သမီးပျိုကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြလေရဲ့ ။ သူတို့ရွာက မီးလောင်တာနဲ့ဝေးတာကိုး အေးဆေးပေါ့ ။ မအေးဆေးနိုင်တဲ့ သမီးပျိုကတော့ ဒေါ်ကြီးတို့အိမ် ရောက်အောင် ပြေးရတာပေါ့ ။ ငယ်ကလည်းငယ်သေးတော့ မရှက်ပါဘူး ။ ပြေးတာ တန်းနေတာပဲ ။
ဘယ်ပြားကုန်းဆိုတဲ့ ရွာလည်းရောက်ရော အမ၀မ်းကွဲတွေနဲ့ တခြားရွာသားတွေက ရွာထိပ်က ကိုက္ကိုပင်ကြီး အောက်မှာ အေးအေး ဆေးဆေး မုန့်လေးစားပြီး သမီးပျိုတို့ ရွာ မီးလောင်တာကို ထိုင်ကြည့်နေကြတာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေသလိုပဲ ။ သမီး ပျိုလည်း တစ်ခါ ကြည့်လိုက်တာ လှလိုက်တဲ့ မီးတောက်ကြီး ကောင်းကင်မှာ ဟီးထလို့ မိုး နေတော့တာပဲ ။ ဟုတ် ခနဲ ဟုတ် ခနဲ တစ်နေရာက တစ်နေရာကို ကူးသွားတာ မြန်လိုက်တာ ။ သမီးပျိုကတော့ တွက်ပြီးသား ငါ့ အိမ်ကတော့ ပါသွားပြီလို့ပေါ့။
မောမောနဲ့ မမရေ လို့ခေါ်လိုက်တော့ အမ၀မ်းကွဲက လှည့်ကြည့်တယ် ။ အံ့သြသွားတယ်ထင်တာပဲ “ဟယ် လာလာ “ ဆိုပြီး အိမ်ခေါ်သွားတယ် ။ ရေတွေတိုက် ထန်းသီးတွေလည်း ခွဲကျွေးသေးတယ် ။ ဘာမှ မကြောက်ဖို့လည်း ပြောသေးတယ် ။ မနက်ဖြန် အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့ ခုတော့ နားလိုက်ဦး ဆိုလို့ ရေချိုး ထမင်းစားပြီး နားလိုက်တယ် ။ ကလေးဆိုတော့ သိပ်လည်း စိတ်မပူတတ်ခဲ့ဘူးလေ ။
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ သူတို့လည်း ပြန်လိုက်ပို့ပါတယ် ။ အိမ်ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတာ ကူသယ်ပေးဖို့ အန်တီ့အိမ်ကိုသွားတဲ့ အကိုတွေ ပြန်လာလို့ သိရပြီးပါပြီ ။ စိတ်တော့ အေးသွားတာပေါ့ ။ ဒါပေ မယ့် ကိုယ့်ရွာကို ကြည့်လိုက်တော့ မိုးကောင်းကင်က မဲညစ်ညစ်နဲ့ သစ်ပင်တွေက အရိုးအပြိုင်းပြိုင်း ။ တစ်ချို့ တိုက်အိမ်တွေဆို အုတ်ငုတ်လေးတွေပေါ်လို့ အုန်းပင်တွေက အမဲရောင် သစ်ငုတ်တိုတွေဖြစ် ။ လမ်းမပေါ်တွေ မှာလည်း အမှိုက်တွေ ပရဗွ နဲ့ မြို့ပျက်ကြီးနဲ့ တူလိုက်တာ ။
သမီးပျို စက်ဘီးလေးကတော့ သူများတွေပြန်လာပေးလို့ ပြန်ရတယ် ပြောတယ် ။ အဲဒီတုန်းက အဆူခံထိသေးတယ် စက်ဘီးနဲ့မပြေးပဲ ခြေကျင်ပြေးတော့ ပိုမြန်မယ် ထင်လို့လားတဲ့ ။ ဟဲဟဲ ။ ကိုယ့်အကြောင်း နဲ့ ကိုယ်ကိုး...နောက်ပြန်လှည့်ရမှာ ကြောက်တာနဲ့ လွှတ်ပစ်ခဲ့တာ ။ သတ္တိက မခေ ပါဘူး ဟုတ်တယ်နော် ။
မီးလောင်တုန်းက နီးစပ်ရာ မြို့နယ်တွေကို ဖုန်းခေါ် အကူအညီ တောင်းခဲ့ပေမယ့် လမ်းမှာ ကားပျက်တာရယ် မပျက်တဲ့ကားက ရေပါမလာတာရယ် လမ်းမှားရတာရယ် နဲ့တင် ဘယ်မြို့နယ်ကလည်းမသိတော့ဘူး တစ်စီးပဲ ရောက်လာတယ်တဲ့ နောက်ပိုင်းကျမှ ရောက်လာကျတာ တဲ့ ။ ပထမ ဆုံးရောက်တဲ့ မီးသတ်အဖွဲ့ ဆုရသွားတယ် ဆိုလား ကြားလိုက်မိတယ် ။
ရွာက အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဘာလုပ်နေကြလည်းလို့မေးကြည့်တော့ မနိုင်မှန်းသိလို့ သူတို့အိမ်တွေ ပြန်ပြီး ပစ္စည်းတွေ သိမ်းကြတယ် ဆိုပဲ ။ အော်.....မှတ်သားလောက်ပါတယ် ။ အင်း......တွေးကြည့်တော့လည်း သူတို့ လည်း သူတို့အိမ်ကို ဘယ်လောင်စေချင်မလဲနော် ။ အပြစ် မဆိုသာပါဘူး ။ ဖြစ်သမျှ အကြောင်း အကောင်း ချည်း လို့သာ ဖြေတွေးရုံ ပေါ့ နော့ ။
ရွာကိုဘယ်သူမီးတို့လည်းဆိုတာတော့ စဉ်းစားကြည့်နော် ။ စပြီးလောင်တဲ့ အိမ်က ဘဲဥကြော်ရင်း စပြီးလောင် တာတဲ့ ။ အင်း....နောက်တစ်ခုကတော့ ရုက္ခစိုးက မကျေနပ်လို့ တို့တာဆိုပဲ ။ မီးမလောင်ခင် ဟိုတလောတုန်း ကပေါ့ ။ ညောင်ပင်ကို ဖုန်းကြိုးလား မီးကြိုးလားနဲ့ မသိဘူး မလွတ်လို့ ခုတ်ကျတယ်တဲ့ ။ အဲဒါကို ဦးကုလား ဆိုသူက မခုတ်ဖို့ တားမြစ်ခဲ့သေးတယ် ဆိုပဲ ။ သူကနားမထောင်ပဲ ခုတ်တယ်တဲ့ ။ အဲဒါက ပြောစကား ကောလ ဟာလပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့် မီးလောင်ပြီးတဲ့အချိန် တစ်ရွာလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ ရွာလယ်မှာ ဦးကုလားအိမ် တစ်အိမ် တည်း အကောင်းပကတိ ကျန်ရှိနေတာကို အံ့သြစွာတွေ့ကြရပါတယ် ။ ခုထိရှိနေတုန်းပါပဲ ။ ရေနံချီး ၀နေတဲ့ ဦးကုလားရဲ့အိမ်ပါ ။ ထူးဆန်းမနေဘူးလား ။
မီးဘာကြောင့် လောင်တယ် ထင်ပါသလဲ ။ မစဉ်းစားတတ်အောင် ပါပဲ ။ ဟိုလူတော့ ထောင်ကျသွားတယ် ပေါ့လေ။ တရားခံက တကယ် ဘဲဥကြော်ရင်း ဆီပူတွေကနေ ရေတွေဘာတွေ ကျလို့ လောင်တာလား ၊ မကျေ နပ်လို့ လောင်အောင် တမင် လုပ်လိုက်တာလား ဆိုတာတော့ ဘယ်သူများ သေချာသိနိုင်ပါ့မလဲလေ....။
မှတ်ချက်။ ။ ငယ်ငယ်က တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ ။ သမီးပျိုတို့ ဖြစ်လိုက်ရင် အဲလိုပါ ။ အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်း ကြီးပဲ ။ ကျန်သေးတယ် ရေကြီးတာတွေ လေတိုက်ခံရတာတွေ များမှများပဲ သိချင်ရင် တော့ ဖောက်သည်ချရချည်သေးရဲ့ ။ ခုတော့ စတော့ပ်တော့မယ် မနက်ဖြန် ဘန်ကောက်သွားရမှာ ဘန်ကောက်မ ရောက်ပဲ အကျန်ကောက်နေရအုံးမယ် ။ လစ်ပြီဗျို့ .........
Labels: ငယ်ငယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်လေး
Friday, September 04, 2009 7:57:00 PM
Beauty Studio USA Branded Store said...
Saturday, September 05, 2009 3:15:00 AM
ဟီ... ခုတော့ ရယ်ရမှာလိုလို၊ မောရမှာလိုလိုနဲ့ ဘာပြောပြော အိမ်မပါဘူးဆိုတော့... တော်သေးတာပေါ့နော်...။
Sunday, September 06, 2009 1:48:00 AM
ခုပြန်ရေးတော့ ရီနိုင်တယ်ပေါ့ :P
Thursday, September 10, 2009 6:35:00 PM
မှလာရောက်လည်ပတ်သောသူငယ်ချင်းကို သမီးပျို မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်ရှင် ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လည်လာရောက်လည်ပတ် ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ရှင် ။
လင်းလက်နေတဲ့ ငါဟာ ထွန်းလင်းဆဲပါ.......... ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတွေတောင် စုံနေပြီပဲ ကြယ်စုံရင်တော့ လသာတော့ မှာပေါ့ လသာရက်ကိုစောင့်စားရင်း ငါဟာ ဆက်လက် ထွန်းလင်းနေဦးမှာပါ အေးချမ်းတဲ့လမင်းကြီးနဲ့ မတွေ့ခင် အထိပေါ့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေများ
ငယ်ငယ်တုန်းက မီးလောင်တာ သတိရလို့ပါ
ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောလေးပါ ချစ်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ
နှလုံးသားက သွေးစက်တွေလေ စာအဖြစ်ပြောင်းထားတာ
နှုတ်တက်ခဲ့တယ် ကွယ် တာ့တာ
@@@ ချမ်းလင်းနေ @@@
Hacking Cite For Roblox
အိုက်ခီလောက် ရဲ့ ယမကာလုလင်
. မိုးခါး* . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .